Gmail အား Online Backup ပြုလုပ်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Gmail အား Online Backup ပြုလုပ်ခြင်း
ဟိုးမိုးကောင်းကင်ပေါ်က ကျွန်တော်တို့ မထိတွေ့နိုင်တဲ့ တိမ်တိုက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mails တွေ ရှိနေကြတယ်။ ဘယ်သူမှ ခိုးယူဖို့ မလွယ်တာ သိပေမယ့် ညတိုင်းညတိုင်း ကျွန်တော်တို့ အိပ်မပျော်နိုင်ကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ?? အင်တာနက် နဲ့ နည်းပညာတွေက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ တိုးတက်နေတာ ကို ကျွန်တော်တို့ သိနေတယ်။ ဒီ ရလာဒ်နဲ့ အတူ hackers တို့ ၊ မသမာသူတို့ ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်တွေ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ နေပြီး အချိန်ပြည့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လစ်ဟာသွားမယ့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ Hacker တစ်ယောက်က ကိုယ်လိုသူလို Mail အကောင့်တစ်ခုကို အပင်ပန်းခံ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘယ်သူမှ မ Hack ကြပါဘူး။ သူတို့ ဘာတွေ Hack မလဲ - သူတို့ အတွက် အမြတ်ရနိုင်မယ့် ဘဏ်တွေ ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လျှို့ဝှက် သတင်းအချက်အလက်တွေ ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ တစ်ခြားနိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ လျှို့ဝှက် စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားချက်တွေ စသဖြင့် ဒါမျိုးတွေကို Hack ကြပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်တွေသုံးတဲ့ ကိုယ်လို သူလို Accounts တွေကိုကျ ဘယ်သူတွေ Hack ကြသလဲ။ အဲလို အမူအကျင့်မျိုးကိုတော့ Hackers တစ်ယောက်လို မကျွမ်းကျင်တဲ့ သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ သမားများ - သူများအကြောင်း ၊ သူများ မသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တိတ်တိတ်ပုန်း အနံ့ခံလိုသူများ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို Hackers လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Hacker နာမည် ပျက်ပါတယ်။ သူတို့က Hackers ဘွဲ့နဲ့ မတန်ပါဘူး။ သူတို့က အောက်တန်းစား သူခိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ သမားများ ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းပေါင်း မနည်းရှိပေမယ့် အမှောင်ထဲက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြုမူလာမယ့် ရန်ကို ကျွန်တော်တို့ အလင်းဘက်မှာ ရပ်နေသူတွေက အချိန်ပြည့် အသင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ပြုမူလာမယ့် အန္တရာယ်ကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီးချိန် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ဆီက ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ အရာတွေကို အမြန်ဆုံး Recovery လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ B-PLAN ရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။
Emails - Emails ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်ပါပဲ။ လူတစ်ချို့က Personal account, Businees account စသဖြင့် Accounts များစွာခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ Accounts တစ်ခုတည်းကိုပဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကစလို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တိုင်အောင် အသုံးပြုကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ၊ သတင်းအချက် အလက်တွေ ၊ နောက် ငွေဝင်ငွေထွက် စာရင်းတွေ ၊ မိသားစု အကြောင်းအရာတွေ စသဖြင့် မနည်းမနော ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မနာလို မရှုစိမ့်တဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက် - တစ်နည်းအားဖြင့် မသမာသူ တစ်ယောက်က ခိုးယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေမလား - ကြိုးစား မနေဘူးလားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော့် အကောင့် အဟက်ခံလိုက်ရလို့ - ကျွန်မအကောင့် ဝင်မရတော့လို့ - လုပ်ပါ မရရအောင် ပြန်ယူပေးပါ - အဲ့ထဲမှာ အလုပ်က အရေးကြီးတဲ့ Mails တွေပါသွားလို့ပါ - စသဖြင့် အမြဲ တွေ့နေကြားနေ ရပါတယ်။ သူများဆီ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အကောင့် တစ်ခု ကိုယ့်ဆီ ပြန်ရောက်လာဖို့ ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ ပြန်ရတယ်ပဲ ထား - ကိုယ့် အကောင့်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို သူ ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီး လုပ်ထားပြီးသား တွေလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mails တွေကို ကာကွယ်ထားဖို့ လိုလာပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဘယ်လို ကာကွယ်မှာလဲ ??
ကာကွယ်နည်းတွေကတော့ မနည်းမနောရှိပါတယ်။ လူတစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Emails တွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် ( ဥပမာ - Gmail ဆိုကြပါစို့ ) ကိုယ့်ရဲ့ Local computer ထဲကို Emails တွေ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ POP3 access ကို Gmail settings ကနေ enable ပေးပြီး desktop mail client အကူအညီနဲ့ local computer ထဲကို download ဆွဲပြီး သိမ်းထားကြပါတယ်။ အဲလို လုပ်ဆောင်ထားလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဟိုးမိုးကောင်းကင်ပေါ်က ကျွန်တော်တို့ မထိတွေ့နိုင်တဲ့ တိမ်တိုက်တွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စာတွေ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Local computer ပေါ်က HD ပေါ် ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာကို လုပ်ဆောင်ရတာ ခက်လည်းမခက်ပါဘူး။ Windows Live Mail, Outlook နောက် Thunderbird စတဲ့ Email clients တစ်ခုခုကို သုံးပြီး အလွယ်တကူ Backup လုပ်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmails တွေကို Backup လုပ်သင့်တာလဲ ??
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေက desktop applications တွေ သုံးပြီး Gmail ကို Backup လုပ်ရတာ သဘောမကျဘူး - သုံးရတာလည်း အဆင်မပြေဘူးလို့ ယူဆမယ် ဆိုရင် နောက်ထပ် နည်းလမ်း တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးပြီး Gmail ကို Backup လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲတာကတော့ ပိုက်ဆံ ပေးစရာမလိုတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ကိုယ့် Gmail တွေ အားလုံးကို Online Backup လုပ်ထားဖို့ပါ။ အဲဒီတော့ Gmail messages တွေကို Online Backup ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ?? ကျွန်တော်တို့ မသွားခင်မှာ Gmail messages တွေကို ဘာကြောင့် Online Backup လုပ်ဆောင်ထားသင့်လဲ ဆိုတာ အခြေအနေ ( ၃ ) ခုနဲ့ယှဉ်တွဲဖော်ပြ သွားပါ့မယ်။
အကြောင်းပြချက် ( ၁ ) – တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ကို မသမာ သူ လူတစ်စုရဲ့ ခိုးယူခံရခြင်း ( Hack ခံရခြင်း ) ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အခါမှာ Account ဆုံးရှုံးသွားပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်မယ့် Data တွေ ဆုံးရှုံးမှု မရှိပဲ အရေးအကြီး အချက်အလက်အားလုံး မိမိလက်ဝယ် ရရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် ( ၂ ) – လူဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိ Mail box ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Mails တွေထဲက အရေးကြီး Mails တစ်ချို့ကို မှားယွင်းပြီး ဖျက်ထုတ်မိလိုက်မယ် ဆိုရင်လည်း Online Backup ကနေ တဆင့် အချိန်မရွေး ပြန်လည် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် ( ၃ ) – တကယ်လို့များ Gmail service - Down သွားမယ်ဆိုရင် ( တကယ်ပါ -Down နိုင်ပါတယ်။ ) တောင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Emails တွေကို သက်တောင့်သက်သာ အပူအပင်မရှိ ဖတ်နေနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail service သူ့ဘာသာ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။
Gmail Messages များအား Online Backup ပြုလုပ်ခြင်း
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ် အကုန်အကျခံစရာမလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail နဲ့ Google apps မှာ ရှိနေတဲ့ Emails တွေကို automatically backup ပြုလုပ်ပေးမယ့် Services ( ၃ ) မျိုး ရှိပါတယ်။
ပုံအမှတ် ( ၁ )
နည်းလမ်း ( ၁ ) - ပထမဆုံး အနေနဲ့ အကြောင်းပြချက် ( ၁ ) ကို ဦးတည်ချက်ထားပြီး Gmail account အချင်းချင်း ဘယ်လို Backup လုပ်ဆောင် သွားမယ်ဆိုတာ တင်ပြသွားပါ့မယ်။ ကိုယ့် Gamil ထဲကို ဝင်ပြီး Settings ကိုသွားပါ။ အဲကနေမှ တဆင့် Settings –> Accounts and Import –> Check mail using POP3 –> Add POP3 email account ကို အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်သွားပါ။
ပုံအမှတ် ( ၂ )
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Email address နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Main Gmail Account ( Backup လုပ်ဆောင်ထားချင်သော account ) ကို add ပြီး Next Step ကို သွားပါ့မယ်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ မြင်ရမယ့် ပုံကတော့ ခုလိုပုံပါ။
ပုံအမှတ် ( ၃ )
ဒီအဆင့်မှာတော့ ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းပေးပြီး Add Account ကို သွားလိုက်တာနဲ့ Google ကနေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Main account ရှိရာဆီကို မူပိုင်ခွင့်ကို အတည်ပြုဖို့အတွက် Code တစ်ခုကို Mail ကနေ ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆင်တူတဲ့ Mail ပါ။
ပုံအမှတ် ( ၄ )
အထက်က ပုံမှာတွေ့နေရတဲ့ code : 37706877 စသဖြင့် ဆင်တူတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Mail နဲ့အတူပါလာမယ့် Code ကို ကိုယ့်ရဲ့ Backup လုပ်ချင်တဲ့ Mail account ရှိရာဆီ ဝင်ကြည့်ပြီး Copy ကူး - နောက် ပုံအမှတ် ( ၃ ) မှာ အဆင့်လိုက် ဆက်သွားရင် နောက်ဆုံးမှာ ရောက်လာမယ့် Verify လုပ်ပေးရမယ့် Box မှာ အဲ့ Code ကို ဖြည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Verify လုပ်ပြီး ချိန်ကနေ စလို့ ကိုယ့် Main account မှာ ရှိနေတဲ့ mail တွေကို Backup လုပ်မယ့် အကောင့်ရှိရာဆီ Mail fetcher program ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း အလိုလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတွေ အားလုံး လွှဲပြောင်း ပြီးဖို့အတွက် ကြာမြင့်နိုင်မယ့် ကြာမြင့်ချိန်ကတော့ ကိုယ့် Main Account ရဲ့ ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Mails အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကြာမြင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းဟာ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ချက် အရ “read” လုပ်ပြီး သွားတဲ့ Mails တွေနဲ့ အရင်တစ်ချိန်က တစ်ခြား POP3 client ကို သုံးပြီး ဒီ Mails တွေကို downloaded ချထားခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် အဲ့ Mails တွေကို လွှဲပြောင်းမပေးတော့ပဲ မူရင်း account မှာပဲ ထားခဲ့တာမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းလမ်းက “true backup” လုပ်ဆောင်နည်းပါလို့ ပြောဖို့ ခက်နေပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ သေချာမယ့် နောက် နည်းလမ်း တစ်ခုဆီ ချဉ်းကပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ဆက်ရန် - >
Last edited by KznT; 28-01-2011 at 03:24 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, မိုးတိန်, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, ဇော်ဝင်းသိန်း, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), မြန်အောင်သား, Annku, arkaraung, azp09, bonge, htun30, kyaukphyu, kyawmyowin, kyawswarl, minthumon, mune007, nyi.nyi, phyomyintthein, tu tu, yawnathan, Zin Ko
ပြန်စာ - Gmail အား Online Backup ပြုလုပ်ခြင်း
နည်းလမ်း ( ၂ ) - ခု ကျွန်တော်တို့ ချဉ်းကပ်ကြည့်မယ့် ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ Gmail Mailbox ကို Windows Live Hotmail ထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းဖို့ပါ။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးခဲ့တဲ့ Gmail ရဲ့ mail fetcher လုပ်ဆောင်ပုံအတိုင်းပဲ Gmail account ကို Hotmail မှာ POP3 သုံးပြီး Add လိုက်ခြင်း အားဖြင့်လည်း ကိုယ့် Gmail account ထဲက Mails တွေကို Hotmail ထဲမှာ အလိုလျောက် Copy ကူးပြီး သိမ်းဆည်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲလို Gmail ကနေ Hotmail ဆီ Backup Copy ထားရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို TrueSwitch လို့ခေါ်ပြီး ဖော်ပြပါ နေရာကနေ သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မြင်ရမယ့် ပုံစံကတော့ ခုလိုမျိုးပါ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးတဲ့ အတိုင်း ကိုယ် Backup လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ Gmail address တစ်ခုနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Account password - နောက် မိမိရဲ့ Hotmail address နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ password ကို ဖြည့်သွင်းပေးပြီးတဲ့နောက် မှာ Copy to Windows Live Hotmail ကို ဆက်သွားလိုက်ပါ။ နောက်စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
TrueSwitch ကိုသုံးပြီး Hotmail Account မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တွေကို Backup လုပ်ရတာ လွယ်လည်း လွယ်ကူသလို တိလည်းတိကျပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာ ရှိနေသမျှ Mails တွေ အားလုံးနဲ့ ပါဝင်သမျှ Attachments အားလုံးကို Hotmail account ဆီ အချိန်ပမာဏ တစ်ခု ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အားလုံးအပြီးအစီး ရွှေ့ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ကြာမှာလဲ ?? တကယ်လို့ ကိုယ့် Gmail Inbox ထဲမှာ Mails တွေက မတန်တဆ များပြားနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ Backup Process ဟာ ( ၂၄ ) နာရီ နဲ့ အထက် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရွှေ့ပြောင်းလို့ ပြီးမပြီး ဆိုတာကို ရွှေ့ပြောင်းလို့ ပြီးရင်ပြီးချင်း Email ပို့လွှတ် အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, မိုးတိန်, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), Annku, arkaraung, aungphyo, bonge, htun30, kyawmyowin, kyawswarl, minthumon, nyi.nyi, phyomyintthein, tu tu, wunna313, yawnathan
Gmail နဲ့ Hotmail နှစ်ခုလုံးက သူတို့ပေးထားတဲ့ Storage space ကို တိုးချဲ့ချင်ရင် တိုးချဲ့နိုင်အောင်လည်း Offers လုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဈေးကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။
အဲလို ဝယ်ယူပြီး ကိုယ့် Google Inbox ကို တိုးချဲ့ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် နောက်ထပ် ဝင်လာမယ့် Mails တွေကို ဆက်တိုက် Backup လုပ်သွားဖို့ အတွက်ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
Hotmail ထဲက Sidebar မှာ ရှိနေတဲ့ ( အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း ) Add an email account ကို click ပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Gmail address ကို Add ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ထားလိုက်တာနဲ့ နောင်တစ်ချိန် Gmail ထဲကို ရောက်လာသမျှ စာအားလုံး လည်း Hotmail ထဲမှာ Backup လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးပြီးခဲ့တဲ့ Services အားလုံးဟာ အားနည်းချက် တစ်ခုစီတော့ ရှိနေပါတယ်။ အဲတာကတော့ သူတို့ အားလုံးဟာ တစ်ခါ Backup လုပ်ဖို့ ဖန်တီးလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ Gmail mailbox ထဲမှာ ရှိသမျှဝင်လာသမျှ Mails အားလုံးကို Backup လုပ်ဆောင်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပြီး - ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Folders တွေကိုချည်း သီးသန့် Backup လုပ်ဆောင်လို့တော့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အထက်ပါပုံမှာ ဖော်ပြထားသလိုမျိုး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ folder တစ်ခုချင်းကိုပဲ သီးသန့် Backup လုပ်ဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Backupify ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Backupify ဆိုတာ Gamil အပါအဝင် ကိုယ့်ရဲ့ Online မှာ ရှိနေတဲ့ accounts တိုင်းက တန်ဖိုးရှိရာတွေကို ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် Backup လုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ခုကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလောက်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာရှိနေတဲ့ messages တွေကို Online မှာ ဘယ်လို Backup လုပ်ဆောင်ထားနိုင်မလဲ ဆိုတာ သိရှိကြလောက်ပါပြီ။ မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ - အချက်အလက် - စာရွက် စာတမ်းတွေကို ခုလိုမျိုး တစ်ခြားနေရာတစ်ခုမှာ ပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားဖြင့် အရေးအပေါ် အခြေအနေမှာ မိမိရဲ့ Data များ ပျက်စီးပျောက်ဆုံး ဆုံးရှုံးခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 28-01-2011 at 03:25 PM..
ချယ်ရီမင်း, မိုးတိန်, ဝင်းအောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), နိုးတူး, arkaraung, aungphyo, bonge, g00gle, htun30, kyawmyowin, kyawswarl, minthumon, mune007, nyi.nyi, pannuko, phyomyintthein, soehtetpaing, thetzin, tu tu, yawnathan
Gmail Forwarding ကို အသုံးချ၍ Backup လုပ်ခြင်း
Forward Mail ကို Email သုံးစွဲတဲ.သူအများစု သိမယ်လို. ယုံကြည်ပါတယ်။ တနေ. တနေ. ကျွန်တော်တို.ရဲ. Email ထဲကို ရောက်လာတဲ. Forward Mail တွေက မနည်းပါဘူး။ ဖတ်ချင်သည် ဖြစ်စေ၊ မဖတ်ချင်သည်ဖြစ်စေ Forward Mail တွေကတော. Inbox ကို ရောက်မြဲပါ။
Forward Mail ရဲ. အခြေခံကတော. ကိုကို က မမကို စာပေးတယ်။ မမက သူ.အမေကြီးကို အဲဒီစာ ထပ်ပေးတယ်။ ဒါပါပဲ။
အဲဒီ Forward mail ရဲ. အခြေခံကို အသုံးပြုပြီး Gmail ကို Backup လုပ်ပါမယ်။ အရင်ကတော. Gmail ရဲ. Filter ကို အသုံးပြုဖို. လိုပေမဲ.၊ နောက်ပိုင်းကျတော. Gmail Setting မှာ နောက်ထပ် Email တခုကို Forward လုပ်ဖို. Option ကို ထဲ.သွင်းထားပါတယ်။
အရင် Email အဟောင်းများကို Backup မလုပ်နိုင်ခြင်း။
1. POP3/IMAP အသုံးပြုရန် မလိုခြင်း၊
2. Password ရိုက်ထဲ.ရန် မလိုခြင်း
Q: ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သလဲ။
A: ကျွန်တော်. previous@gmail.com ထဲ Emails တွေရောက်လာတယ်။ Gmail က ဒီ mail ကို new@gmail.com ကို အလိုအလျောက် Forward လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ. ဒီမှာတော. ကျွန်တော်တို. တွေ.နေကြအတိုင်း Forward:"ဘာညာ ဘာညာ" ဆိုပြီး မတွေ.ရဘူး။ previous@gmail.com ကို ပို.လိုက်တဲ. Email အတိုင်း new@gmail.com မှာ တွေ.နေရမယ်။ တနည်းအားဖြင်. Mail အသစ်တွေကို နောက် Email မှာ Backup လုပ်လိုက်တာပေါ.။
Q: ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
A: ပထမဆုံး Gmail ထဲဝင်ပါ။ ညာဘက်ထောင်.က Setting ကို နှိပ်ပါ။
Forwarding and POP/IMAP ကို နှိပ်ပါ။ Addaforwarding address ကို နှိပ်ပါ။
Addaforwarding address ဆိုပြီး Box တခု တွေ.ရပါမယ်။ ကိုယ်. Email လိပ်စာ အသစ်ကို ရိုက်ထဲ.ပေးပါ။
Next ကို နှိပ်ပါ။ A confirmation code has been sent to verify permission. ဆိုပြီးတွေ.ရပါမယ်။ ကိုယ် ခုနက ရိုက်ထဲ.လိုက်တဲ. Email ဆီကို Vericfication Code ပို.လိုက်ပါပြီ။ Sign Out လုပ်ပါ။
Email အသစ်ကို ၀င်ပါ။ Google ဆီက Mail တစောင် ရောက်နေတာ တွေ.ရပါမယ်။ Please click the link below to confirm the request: အောက်က အပြာရောင် Link ကို နှိပ်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် Confirmation code လို. ရေးထားတဲ. နံပါတ်ကို Copy ကူးပါ။
Email အဟောင်းကို ပြန်သွားပါ။ Setting >> Forwarding and POP/IMAP ကို ပြန်သွားပါ။
confirmation code ဆိုတဲ.နေရာမှာ ခုနက Copy ကူးထားတဲ. Code ကို Paste လုပ်ပေးပါ။ Verify ကို နှိပ်ပါ။
နောက် Forwardacopy of incoming mail to ဘေးက အ၀ိုင်းလေးကို Check လုပ်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ. Screen အောက်ဆုံးကို သွားပြီး Save Changes ကို နှိပ်ပါ။
နောက်ဆို အရင် Email အဟောင်းထဲကို ၀င်လာတဲ. Mail တွေ၊ Email အသစ်ဆီကိုပါ ရောက်လာပါပြီ။ Email အသစ်ကို သုံးပြီး၊ Email အဟောင်းကို Backup ထားလို.ရပါပြီ။
Last edited by g00gle; 11-09-2011 at 08:48 AM..
ချယ်ရီမင်း, မိုးတိန်, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), မြန်အောင်သား, bonge, hellboy, htun30, kyawmyowin, kyawswarl, KznT, lifemark, minthumon, nangnoonkham, nyi.nyi, pannuko, soehtetpaing, thureinsoe, tu tu
Email တခုက တခုပြောင်းချင်တဲ. သူတွေ အတွက် ကောင်းတဲ. Website လေး တခုနဲ. မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Gmail, Hotmail, AOL Mail ဆီကို ပြောင်းဖို. Links တွေ ချိတ်ထားပါတယ်။ တခြား ပိုက်ဆံပေးရတဲ. Comcast, Verizon တွေကို ပြောင်းချင်လဲ ပြောင်းလို. ရပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက Free when you switch to our partners အောက်မှာ ရှိတဲ. Email Icon ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို Email ပြောင်းဖို. သက်ဆိုင်ရာ Page ကို ရောက်သွားမှာပါ။ Username, Password ရိုက်ထဲ.လိုက်ရင် ရပါပြီ။ Gmail အတွက်ဆို Import Mail & Contacts က လုပ်ရပါမယ်။ အခု ဒီဆိုဒ်လေးကြောင်. ဘယ်ကနေ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိတဲ. သူအတွက် အချိန်ကုန် သက်သာတာပေါ.။ မြန်လဲ မြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းတာ Emails 2500 ကျော်ကို2နာရီကျော်ပဲ ကြာပါတယ်။ Email ပြောင်းချင်ရင် မြန်မာမိသားစုကို ၀င်လာ Gmail Backup လုပ်ဆောင်နည်းမှာ လာကြည်.ပြီး TrueSwitch ကို Click လိုက်နော်။
မိုးတိန်, မျိုးကို, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), bagothar85, kyawmyowin, kyawswarl, minthumon, nyi.nyi, pannuko, tu tu
google, how to, internet
Windows7တွင် Step by Step Backup ပြုလုပ်ခြင်း KznT Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 11 08-11-2013 10:44 AM
လွယ်ကူလေ့လာ Backup နည်းပညာ KznT Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော015-02-2010 09:51 PM
Migo PC Backup Pro 8.0.18 PyaitSone Applications 1 17-08-2008 04:31 AM